Tareenka xawaaraha sare ee Bursa ayaa hada lagu xayiray xadaynta amaahda dibadeed | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaTareenka Xawaaraha Sare ee Bursa Hadda Waxaa Lagu Soo Daray Xadka Xadka Dibadda Ee Dibadda
16 / 03 / 2020 16 Bursa, Ahmet Emin Yılmaz, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, qorayaasha
Tareenka xawaaraha sare leh ee Bursa wuxuu hadda ku xaddidan yahay xaddidaadda amaahda dibedda
Waqti dheer magaca waan ka wada hadalnay ... Laakiin Bursa 'mashruuca tareenka Tareenka Xawaaraha Sare hadda waan ognahay Maxaa yeelay, Bursa-Bilecik in line tareenka xamuulka iyo labadan tareen sababo farsamo awgood kuma shaqeyn karaan isla qadka.
Magaca tareenkayaga TCDD in dukumentiyada Tareen caadi ah lagu qeexay sida Khadka Tareenka Sare ee Sare gudbaa sida. Taasi waa, xawaaraha tareenka caadiga ah waxaan yeelan doonnaa tareen.
Waxaan aasaaskii la galnay farxad weyn bishii Diseembar 2012 Tareenka Bursa mashruucu wuxuu soo maray dhibaatooyin bilowgii iyo mashruucu xawaaraha la doonayo Waxa aanu u guurto.
Markaan taas dhaho…
Bursa dadaalka si wanaagsan loogu talo galay ee siyaasiyiinta, gaar ahaan xildhibaanada, iyo dardar galiya shaqada Waa in lagu nuuxnuuxsado in isku daygooda la qiimeeyo.
Ankara maxaa yeelay waxay u egtahay mid ka duwan dadaalka wanaagsan weli go'aan kama gaarin.
Ankara 'asxaabta gudaha wararkii ugu dambeeyay waxay muujineysaa in nasiibdarrooyinka mashruucu sii socdo. Asxaabtii aan la hadalnay en ina waxaan ka baranay tan:
40 kiiloomitir oo aan wali bilaabmin Yenisehir-Bilecik in muddo ah in la maalgeliyo khadka deyn dibedda ah doon ah TCDD deyntaan helay. Laakiin markan sidoo kale Waxaa ka buuxa khadadka shisheeye Turkey ee credit sababta oo ah ansixinta Baro guuldareystay.
Mustaqbalka dhow Yenisehir-Bilecik Suuragal maahan in la bilaabo qadka.
Asxaabtii aan la hadalnay "In xilli xilli ah la waaya-karaa" waxay soo jiiteen fiiro iyo Inaad lumiso niyadda oo aad rajo dhigto Waxay ku yidhaahdeen.
Sida laga soo xigtay iyaga ...
Turkey 'Dhibaatadan waa laga gudbi karaa iyada oo aan la sugin dhibaatooyinka dhaqaale in la wanaajiyo, laakiin waxay ku xidhan tahay ajendaha farsamooyinka go'aanka gaadha. dhibaatooyinka waaweyn Waxaa. Taasi waa sababta fidinta aragtida aragtida waa inaad sugtaa.
Waxay kaloo intaa ku dareen:
Waxay ku xiran tahay Bursa inay hubiso tan. Si kastaba ha noqotee, firfircoonaanta Bursa waa inaysan uga tagin waxqabadyada siyaasadeed keligood. Tani waa waxa ka dhacaya magaalooyin kale, laakiin waxaa ka maqan Bursa. ”
Ha xanaaqin, laakiin ka soo qaad ereyadan Bursa, oo aan aqoon sida loo sugo, ayaa in yar sii sugi doona Waxaan fahamsanahay.
Farsamada Farsamada: Xawaaraha tareenka isma beddelayo
Bursa 'in la beddelo magaca mashruuca tareenka agabyada la xiriira waxay u egyihiin sidan:
"Bedelida magaceeda Tareenka Sare ee Sare waa codsi farsamo oo lagu helo amaahda shisheeye."
Macluumaadka ay bixiyaan waa tan:
“Xawaaraha ugu badan ee 200 kiiloomitir ee tareenka isma beddelo. Waa 250 kiiloomitir oo Tareenka Xawaaraha Sare ku socda oo wax rar ah laguma qaadi karo khadkan. Dhanka kale, 200 kiiloomitir waxaa lagu qaadi karaa Tareenka Xawaaraha Sare iyo rakaab iyo xamuul. ”
Akoonku waa kan:
"Farqiga u dhexeeya 105 kiiloomitir safarka Bursa-Osmaneli ee u dhexeeya labada tareen waa 6-7 daqiiqo oo keliya." (Ahmet Emin Yılmaz/dhacdo)
Konya Tareenka Xawaaraha Sare
Tareenka Baaskiillada Sare ee Bursa wuxuu ku dhajiyay Dhibaatooyinka Gawaarida
Ogeysiiska Qandaraaska: Ku sawir wejiga iyo qalabka dhejinta qalabka ayaa la geyn doonaa TÜDEMSAŞ
Tababar Gemlik ah ayaa lagu qabtay geedo midho leh
Iibso hadda Renault ee Maajo, Bixi 2015 iyo fursado soo jiidasho leh midba midka kale…
Waxaa ku jira Eurail Pass haatan ka mid ah dalka Turkiga
Hadda mashaariicda waalan
Saldhigga Metro ee Trabzon
Aanu Noqonno Magaalo, Waxaanu Heli Karnaa Qeybta
tareenka xawaaraha sare ee bursa
Wadada Tareenka Sare